Dad Lala Xiriirinayo Weerarkii Al-Shabaab Ee Hoteelka Dusit D2 Ee Nairobi Oo Maxkamad Kasoo Muuqday – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 28th January 2019 0198
Wargeyska The Nation ee ka soo baxa Nairobi waxa uu maanta qoray in maanta 3 Eedeysane la soo tagaay Maxkamdda, kuwaasi oo ay Ciiddanka Boliska habeenkii Jimcihii ka soo xireen deegaano kala duwan oo ka tirsan Kenya.
Ciiddanka Boliska ee La-dagaalanka waxa loogu yero Argagixisadda ee ATPU waxay ka codsadeen Garsoorka Maxkamadda in loo oggolaado inay Eedeysanayaashaasi sii hayaan muddo 5 maalmood, si ay u soo dhamaystiraan Baraitaankooda.
Askari ka tirsan Ciiddanka Boliska ee ATPU oo lagu magacaaboNiyuutoon Mawangi waxa uu sheegay inay Eedeysanayaasha soo xireen Jimcihii, balse aysan weli baarin wicitaanka Telefoonadooda Mobaylka.
Waxa uu sheegay in baaritaan hordhac ah muujinayo inay Eedeysanayaasha xiriir la leeyihiin Eedeysanayaal kale oo ku lug lahaa weerarkii Alshabaab ee ay bishan 15-dii ku qaadeen Hotelka Dusit D2 ee Nairobi, waa sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, Saddexda Eedeysane waxaa la filayaa in dacwadooda la dhegeysto maalinta Jimcaha ee soo socota, sida uu qoray Wargeyska The Nation.
SAWIRRO:-Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo gaaray Dhuusamareeb
Ahmed sudani 17th January 2018